Dibadbaxyo ka dhan Booliska Minneapolis oo weli socda iyo wiil Soomaali ah oo sabab u ah. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Dibadbaxyo ka dhan Booliska Minneapolis oo weli socda iyo wiil Soomaali ah...
Dibadbaxyo ka dhan Booliska Minneapolis oo weli socda iyo wiil Soomaali ah oo sabab u ah.
Qurbaha.net:- Kadib dilkii magaalada Minnieapolis ay ciidamada booliska ugu geysteen Doolaal Ciid oo 23 jir ahaa una dhashay wadanka Soomaaaliya ayaa weli waxaa magaaladaasi ka sii socda dibad baxyo looga soo horjeedo ficilka ay booliska Maraykanku ku dileen wiilkaasi dhalinyarada ah.
BBC-da ayaa qortay in dilkaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay oo boolisku ay qof rayid ah ugu geystaan magaaladaasi tan iyo dilkii George Floyd, ay caro badan ka muujiyeen dad fara badan oo madow iyo cadaan ah kuwaasi oo hora yuga falceliyay dilkii George Floyd oo ahaa nin madow oo boolisku ay dileen bishii May ee sanadkii tagay.
Booliska ayaa arbacadii la soo dhaafay joojiyay Doolaal oo sida la sheegay looga shakisanaa in uu ku lug lahaa fal dambiyeed weyn, kaddibna toogasho ku dilay.
Manta oo isniin ah ayaa magaaladaasi waxaa isugu soo baxay dad badan oo madow ah oo u badan Soomaali kuwaasi oo ku dibad baxaya erayo ka dhan booliska Maraykankan, waxaana ay dalbanayaan in maxkamad lasoo taago askarigii dilka u geystay Dalool Alle ha u naxariiste.
Duqa magaaladaasi Minneapolis, Jacob Frey, ayaa sheegay in ay ka go’an tahay in uu ogaado xaqiiqda ku saabsan sidii ay wax u dheceen iyo in la helo caddaalad.
“Waanu ognahay in caawa qof loo qoonsaday nolashiisa isla markaana kalsoonida booliska iyo dadka madowga ahi ay sii xumaaneyso,” ayuu ku sheegay warbixin qoraal ah oo uu soo saaray.
“In dib loo soo celiyo kalsoonidaasi ayaa waxay u baahan tahay in si hufan loo baaro wixii dhacay.”
Dilkii boolisku u geysteen George Floyd ayaa sababay in lagu baaqo in isbadal weyn lagu sameeyo booliska ama xitaa la kala diro booliska magaaladaasi balse arrimahaasi ayaan ilaa haatan suurtagelin.
Mohamed Abdi Nahar.
Previous articleSharciyo cusub oo ka dhaqan geli doona Sweden iyo saameynta Soomaalida.
Next articleDowladda Britain oo danjire cusub u magacowday Soomaalia.